Nzira Yekutsanangurwa Nzvimbo Eindhoven - Law & More B.V.
Nzira Yekutsanangurwa Nzvimbo Eindhoven
Law & More iri mu "Twinning Center" pane kambasi yeEindhoven University of Technology. Munguva yenguva dzose maawa ehofisi, unogona kumhan'arira kunzvimbo yekugamuchira iyo iri muchivakwa chiri padyo, "De Catalyst". Kunze kwemazuva ese ehofisi maawa, ndapota taura nesu nefoni kana wasvika.
Ongorora: Kana iwe ukashandisa nzira yekufambisa, pinda mharadzano ye "De Lismortel" uye "Horsten". Kubva panguva ino, unogona kuwana iyo 'De Catalyst' chivakwa kurudyi. Kero ya "De Catalyst" ndi "De Lismortel 31", Ye De Catalyst pane makoramu ane nhamba dzekuvaka 76 uye 77.
Kubva kuA2 kubva kuDen Bosch:
Kubva paA2 / N2, panosangana Ekkersweijer, tora iyo A58 yakananga Son en Breugel.
Mushure memakiromita 3.9 tendeuka uende kurudyi paJohn F. Kennedylaan wakanangana neEindhoven Centrum.
Pamharadzano neRin'i, tendeuka kuruboshwe nenzira yaHelmond.
Tendeuka kurudyi kumarobhoti (pamberi petekisi yeTechaco).
Pfuura nepamagedhi ekubhadhara eTU / e.
PaT-junction tendeuka kurudyi uchienda kwaDe Lismortel (saka usatendeuka kuruboshwe uchienda kwaDe Zaale).
Panotevera T-junction tendeuka kurudyi zvakare kumucheto kwemugwagwa kuenda kurudyi kwaunozoona iyo Twinning Center; pakatarisana nemusuwo mukuru ipaki yedu yemotokari.
Kubva kuA2 kubva kuMaastricht kana kubva kuA67 kubva kuVenlo kana Antwerp:
Panosangana Leenderheide, tora nzira yeEindhoven, Centrum / Tongelre.
Iwe unopinda Eindhoven padenderedzwa. Ramba uchienda kumberi kumberi uye parobhoti rechipiri (pamharadzano neRin'i) tora nzira yeNijmegen / Den Bosch (Piuslaan). Ramba uchitevera uyu muratidziro (pamusoro pemugwagwa, pasi pechitima).
Panotenderera panotevera tora wechipiri kubuda (Insulindelaan).
Tendeuka kuruboshwe kumarobhoti (pamberi petekisi yeTexaco).
Kubva kuA58 kubva kuTilburg:
Panosangana Batadorp tora nzira yekubuda muRandweg Eindhoven Noord / Centrum uye paEkersweijer junction tora nzira yekubuda Randweg Eindhoven / Centrum (tendeuka kurudyi panosangana). Wobva waramba uchitevera iko kunongedzera Centrum.
Kubva kuA50 kubva kuNijmegen:
Paunosvika muEindhoven, tevera mafambiro kuCentrum.
Mushure memakiromita 3.9 tendeuka kurudyi paJohn F. Kennedylaan wakanangana neEindhoven Centrum.
Kubva kuA270 kubva kuHelmond:
Parobhoti yechipiri muEindhoven, tendeuka kurudyi munzira, nzira Ring / University / Den Bosch / Tilburg.
Ne Ruzhinji Zvifambiso
Eindhoven University of Technology inowanikwa nyore. Zvese zvivakwa zveyunivhesiti zviri padyo nechiteshi chechitima muEindhoven. Pamepu yeyunivhesiti nzvimbo, Twinning Center inoratidzwa seTSCE.
Enda pasi pamatanho epuratifomu, wobva watendeuka kurudyi uchibuda kuchamhembe (chiteshi chebhazi), iyo Kennedyplein.
Unogona kuona zvivakwa zveyunivhesiti kurudyi, kungofamba kwemaminetsi mashoma. Iyo Twinning Center iri panoperera iyo TU saiti (kufamba chinhambwe ingangoita maminetsi gumi nemashanu). Tevedza yero museve zviratidzo ku "De Lismortel".